विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी एकता अधिकारीको परिवारले कति क्षतिपूर्ति पाउलान् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी एकता अधिकारीको परिवारले कति क्षतिपूर्ति पाउलान् ?
काठमाडौं, २८ कात्तिक । इथियोपियाली विमान दुर्घटना भएको २ वर्षपछि अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । बोइङले मृतकका परिवारको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिसकेको छ ।
डोटी, १७ मङ्सिर: दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मतदान गरिएको छ । उक्त